Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka. W/Q: Maxamed Nuur Shire | Somali Mirror	You need flash player
Nadwado Muqdisho loogu qabtey Odayaasha Dhaqanka. Qarax Qofkii sidey ku dhintey Muqdisho. Mu’asasada Safa oo Dowro labaad ka bilowdey Muqdisho. Mid kamid ah dhagarqabayaashii dhacay xawaaladda Kaah oo maanta lagu qabtay G/Kacyo War degdeg ah: Isuduwaha amniga gobolka Mudug oo caawa lagu dilay magaalada G/kacyo Kufsiga: Dhibaato Dan laga leeyahay!! Sh. Bashiir oo ka badbaaday qarax loo dhigay Iskoolada luqadaha sidee u hormarinaa? Qalinkii: Sh. Axmed C/samad Nadwo ku aadan isaga digiga waxyaabaha lagu halaagsamo oo ka dhacdey Muqdisho. (Sawiro) Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Baydhabo la dajiyey Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka. W/Q: Maxamed Nuur Shire
Published on December 10, 2011 by Somalimirror · 2 Comments · Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka, waa qormo aan ku qaadaa dhigi doono dhaqannada cusub ee ay soo kordhiyeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed.
Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka waa qeyb ka mid ah taageerayaasha koox ka mid ah kuwa ku hardamaya waddanka Soomaaliya, waxaana ay sheegtaan inay iyagu afka ka jihaadayaan.
Mujaahidiinta fadhi ku-dirirka waxa ay ka kooban yihiin 3 qeybood oo kala ah:
1-Kuwa afka ka hadla
2-Kuwa wax qora
Haddii aan ku hormaro kuwa afka ka hadla: waa kuwa ay suuragalka u tahay inay dadka si guud ula hadlaan, haddii ay ahaan laheyd inay Masaajid kala hadlaan, iyo inay warbaahinta qeybaheeda kala duwan isticmaalaan.
Qoladan koowaad iyagu waxa dhib badan ka haysataa sidii ay aragtidooda dadka u laqsiin lahaayeen, iyadoona marka ay ka hadlayaan meelaha ay fariintooda ka gudbinayaan uu ka muuqado ciil badan oo ay u qabaan bulshada qeybaheeda kala duwan.
Kooxda labaad waa kuwa wax qora, qoladan iyo kuwii ka horeeyeyba ma badna, waxayna geed dheer iyo mid gaaban u fuulaan sidii ay qoraal ugu difaaci lahaayeen waxa ay aaminsan yihiin, iyagoo dacaayado badan ku fura qolyaha fikradaha ay qabaan diiddan.
Kooxda kale waa qolyo iyagu ayan suuragal u aheyn inay si guud dadka ula hadlaan, ama inay wax qoraan, balse iyagu waxa ay aaminsan yihiin waxa ay ku gutaan muran. waxa ay tagaan meelaha bulshadu isugu timaaddo, waxaana ay ku doodaan wixii ay ka soo maqleen ama ka soo aqriyeen qoyalaha ay isku taageerada yihiin.
Mujaahidiinta fadhi ku-dirika waxa ay aad u neceb yihiin marka la weydiiyo hal su’aal waana middan:
” Haddii waxa aad sheegeysaan idinka dhab yihiin maxaad idinku u jihaadi weydeen?: taasi waa su’aasha ay ugu neceb yihiin in la weydiiyo, qofka arintaas soo hadal qaadana waa midka ay ifka ugu neceb yihiin, iyagoo u isticmaala erey marka ay caroodaan ay dhahaan, dib ayuu inooga imaan doonaaye.
Sababta ay su’aashaas u neceb yihiin waa, inay iyagu dhahaan Jihaadka socdaa waa mid qof walba laga rabo oo sida salaadda oo kale qof walba Waajib ku ah. dadka kale qaarkood waxay ku xukumaan inay waajibkaas ka fariisteen, balse marka iyaga la weydiiyo waxa ay uga fariisteen waajibka ay sheegayaan waxa ay la dibiraan caro.
Qaar ka mid ah Wadaadada fadhi ku-dirirka ayaa waxa ay dhahaan “Sheikh hebel waa faasiq, maxaa yeelay Sheikhul Islaam Ibnu Teymiyah ayaa sheegay inuu faasiq yahay Sheikhii Jihaadka ka fariista” haddii lagu dhaho adigu ma faasiq baad tahay? “wuxuu ku leeyahay shaqsiyadda qofka lama faragashto” isaguna cidda uu xukumayo waa qof iyo bulsho gaar ah. bal adigu fahan.
Mujaahidiinta fadhi ku-dirirka ereyada ay isticmaalaan waxaa ka mid ah:
Munxarif iyo kuwa kale.
Ereyadaas waxay u isticmaalaan dadka ay diiddan yihiin qeybahooda kala duwan, sida ay ereyadu u kala culus yihiinna waxay ugu dhahaan sida ay u kala neceb yihiin dadka ay u isticmaalayaan, waxaa xusid mudan in ereyga “Murtad” ay isticmaalaan marka ay aad u xanaaqaan.
Waxaa dhici karta in ereryadu sida ay u kala culus yihiin ayan u kala xulanin, iyadoo xiliyada qaarna sida afkooda ay ugu soo kala hormaraan ay u dhahaan, mana kala jecla haddii uu kugu dhaho wax uusan kaa aaminsaneyn maaddaama uu aad kuugu careysan yahay.
Taageerayaashan waxa ay qaataan mowqifba midka uu ka adag yahay, haddii laba mas’alo oo labuduba la qaadan karo ay isu qabtaan waxa ay xushaan midda ay is leeyihiin dadka ayaad ku dhibi kartaan oo waa ay ku culus tahay, waxaa xusid mudan in Taageerayaasha iyo qolayaha ay taageersan yihiin ay mowqif ahaan u fog yihiin Taageerayaasha, waxaana la arkaa inay qabaan wax ayan qabin qolyaha ay taageersan yihiin.
Dad badan waxaa fogeeya oo neceyb ku beera taageerayaasha,” Wadaadada fadhi ku-dirirka” waxaana marmar ay dusha saartaan wax ayan qabin qolyaha ay taageersan yihiin, ama diiddan yihiin, taasoo qolyaha ay taageersan yihiin ka fogeysa dad badan oo beer jileec markii hore u hayey.
Qaar ka mid ah tilmaamaha ay leeyihiin Mujaahidiinta fadhi ku-dirirka:
Aflagaaddo iyo kuwa kale oo badan.
La yaab malahan in mid ka mid ah mujaahidiinta fadhi ku-dirirku uu cidda uu neceb yahay ku xukumo in dhiigiisu banaan yahay, iyadoo waxa qofka Muslimka ah dhiigiisa lagu baneynayo ayan dhaafsiineyn in badan ciil laga qaaday, hadallo qofkaasi jeediyey, ama qoraalo qofkaasi qoray iyo wax la mid ah, taasoo ay dhici karto in sida ay u fahmeen ”
Qormadii ku saabsaneyd Mujaahidiinta fadhi ku-dirirka intaan ayaan ku soo afmeerayaa.
W/Q: Maxamed Nuur Shir
safiyo maxamed says:	December 10, 2011 at 10:14 am	waxan u arkaa ninka wax soo qoray laftirkiisu inuu ku jiro fadhi kudirir uusana is ogayn, camal la’aani waa ayaan darro ee wax kale oo aad qorto miyad wayday
abshir says:	December 10, 2011 at 6:17 pm	As walal aad iyo aad ayaa ugu mahadsantahay sida wanaagsan oo aad maqaalka noogu soo bandhigtay waxaana rajaynayaa in badan oo raagas ah ama kuwa niyada ka taageersan in ay wax badan ku waana qaadan doonaan adiga alle ajar iyo xasanaad hakaasiiyo